Bhuku Rakavanzwa Himachal Tour Package Kuti Uone Nzvimbo Dzisina Kuwanikwa MuHeachal Pradesh | Dana @ + 91-993.702.7574
Kana uri kutarisira kutsvaga magichi echando-capped peaks uye kurasikirwa mumipata isingasviki, Hidden Himachal Tour ndewewe. Himachal Pradesh ndiyo nzvimbo yeIndia yekutambira nzvimbo yekutambira, asi nzvimbo dzakawanda dzisingatauriki uye dzakavanzwa kubva kune ziso revatariri venguva dzose. Nzvimbo dzeSvondo Mabvaki 'Akavanzwa Himachal Tour achakuendesa kuti uongorore nzvimbo dzisingazivikanwi. The 'Indian Switzerland'ine chirevo chakanyanya chakavanzika, chakavanzika uye chenguva dzisina kufanana chinopisa nerunako. Runako hweHimachal haringagoni kupfupiswa mumashoko mashoma kana mitsara! The Hidden Himachal Tour ichakupa zvose zvakanaka. Makomo ekumusoro, kunyanya muHaachal, ane zvakawanda zvezvinhu zvinoonekwa uye zvisingaoneki izvo munhu anogona kuita kuti abhabhatidza mukanaka hwemafuro aya. Kusiyana nezvimwe zvizhinji Himachal Tours kufamba, izvi hazvikwanisiki kana kutarisa. The Hidden Himachal Tour inokuendesa kune imwe nyika yezvishamiso zvekurota kwako, uye iwe hauzombodi kumuka! Apo iwe unofamba nemumiti yakanaka yemapuro nemiti yemapine, shandisa kupisa kwekutya kwezvikomo uye uve nemafungiro anofadza pamusoro pemakoronga makuru akavanzwa mushure pemiti yakareba.
Kubvira parwizi rafting kuenda kunofamba zvinhu zvose zvaunofungidzira zvinogona kuitwa pano. Himachal zvinoreva kuti " Nyika yechando "Ndiyo nzvimbo yakakwana kune chero bhegi rakazara pasi rose. Saka, takura zvikwama zvako zvino! Uye gadzirira kugadzirisa zvakare Himachal neSand Pebbles 'Kutarisa Kunzvimbo Dzisina Kuwanikwa muHeacachal.
09 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 254
ZUVA 01: CHANDIGARH - SHIMLA (125 KMS / 04 HRS)
Svika kuChandigarh Railway Station uye utakure kuShimm, motokari yemaawa anopfuura 04. Reza Shimla manheru kusununguka kuongorora Mall. Usiku huno paHotel.
ZUVA 02: SHIMLA - SANGLA (230 KM / 08-09 HRS)
Dharira ku Sangla kuburikidza nemiti yakakura yeFofri, Fagu neNarkanda uye pamwe neRwizi Sutlej kuti uuye manheru uye uone ku Luxury Luxury. Fara manheru manzvimbo dzakanaka dziri mumupata weBaspa pahupamhi hwe 9000 ft. Ichi ndicho chimwe chezvikomo zvakanakisisa muHimalaya uye kazhinji inofananidzwa nemugwa unozivikanwa weKashmir. Ichizivikanwe neChinnauri chikafu chemichero nemiti yemichero yemapuro, uyu mupata wakazarurirwa vashanyi chete mu1993 nekuda kwepedyo pedyo nemuganhu weTibetian. Usiku huno paHotel.
ZUVA 03: SANGLA - CHHITKUL - SANGLA (STAY) (03 HRS./40 KM) HRS
Mushure mekudya kamborozha, tsvagai nzvimbo dzakapoteredza kusanganisira yekare Kamru Fort & Temple yakatsaurirwa kuna Mwarikadzikadzi Kamakhya Devi uyo akauyiswa kubva kuAsam & Nages Mwari. Post Lunch, kuenda kuTitkul - musha wokupedzisira wekare wekuDe Indo - Tibetan Trade Route. Famba kuburikidza nemiti yemichero yemavara uye brilliant stream. Dzokera ku Sangla kuti udye neusiku husiku.
ZUVA 04: SANGLA - KALPA
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani, tarisa kubva kuhotera & kuendesa kuKalpa - Chigaro cheKunharaunda yeKinnar & kamwe mudiwa weDain Dalhousie. Svika Kalpa & Tarisa muhotera yako. Kalpa aizivikanwa seChin shure mumazuva apo yaiva Regional Capital. Kalpa yakachinja zvishoma mumakore ekupedzisira e500. Zvinonzi apo & apo Ishe Dalhousie aida kutora purogiramu yake yakazara muShimmla, aizouya pano paHondo rake. Rimwe nerimwe nekona imwe neimwe yeKalpa inotarisana neJorkanden neKinner Kailash Peaks, inofananidzwa seimwe yemisha yemitambo yaIshe Shiva & parutivi rwayo ndeye 79 dombo rekugadzira dombo rakafanana neShivlinga iro rinoshandura ruvara sezuva rinopfuura uye rinoonekwa kune ziso rakashama pazuva rakajeka. Itai kuti mushure mekudya kwemasikati muHarare & manheru manyokera kuBuddhist Gompa - Hu Bu Lan Kar. Usiku huno paHotel.
ZUVA 05: KALPA
Mangwana mangwanani anofara zuva richibuda kune Kinner Kailash Peaks. Mushure mokudya kwekudya Kalpa inozivikanwa nokuda kweApple & Chilgoza Plantations imwe yemhando Dry Fruits, inowanikwa muIrish neTurkey kunze kweiyi pano. Muti uyu ndewemhuri yePine uye chibereko chiri mukati pe inch long long cover. Enda kunzvimbo yekwedu & Narayan Nagini Temple, iyo ine Shrines yeHindu, Buddhist & vanamwari vemunharaunda. Masikati manheru kuenda kuRoghi Village kunotsvaga 'Pahari' Upenyu. Shandisai nevanogara. Dzokera kuKalpa. Usiku huno huripo.
ZUVA 06: KALPA - TABO
Mangwanani mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwemaawa anotora kubva kuhotera ndokuenda kuTabo Panzira iyo shanyira Nako. Nako ine dziva rakanaka rinopisa munguva yechando uye vagari vomunharaunda vari kutamba neHockey panguva iyi uye vachiona temberi yePadmasambhava, yechipiri chimiro chaIshe Buddha uyo akaita Buddhism yakakurumbira muTr Himalayas. Gare gare uende kuTabo. Usiku humwe musasa pedyo neguta.
ZUVA 07: TABO - KAZA (106 KM / 04 HRS) - 3600 M
Mushure mekunge rwendo rwekudya chamangwanani rwunotanga kuparidzira Ajanta yeHimalayas yeTabo monastery. Tabo ine mapako akare-kare pamakomo asingabereki uye Tanka mifananidzo, imwe yemifananidzo inokosha zvikuru yeBuddha. Zuva rine kushamisika apo kushanya kumusha wemakore emakore 500 mummy kunoita kuti ufambe uye unofadza. Usiku huno paKaza.
ZUVA 08: KAZA
Mushure mokudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kweKee kereke yevanamende neKibber musha panzvimbo ye 4205 M. Mushure mekudya kwemasikati motokari kune yakakwirira kupfuura motokari yeLandza uye pavanoshanyira mutaundi we Comik na Hikim. Usiku huno paKaza.
DAY 09: KAZA KUMZUM LA - PASS - MANALI (08 HRS / 188 KM) - 3340 MTRS
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani kwekutanga ne06.30 hrs, tarisa kubva kuhotera & kuendesa kuManali kuburikidza ne Kunzumla Pass iyo iri 4590 M. Kupfuura kupfuura yeSpiti Lahaul Road. Rudyard Kipling akati weharaunda "Zvirokwazvo Mwari anogara pano ino nzvimbo yevarume". Ngasvika kuManali manheru. Usiku huno paHotel.
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani ngavabve muhotera uende kuChandigarh. Drop pa Chandigarh Airport / Railway station.